Bandhigga 14aad ee Bugaagta Hargeysa oo Si Rasmi ah u furmay iyo Arrimo Xiiso leh oo sannadkan ku cusub (SAWIRRO) | Berberanews.com
Home WARARKA Bandhigga 14aad ee Bugaagta Hargeysa oo Si Rasmi ah u furmay iyo...
Hargeysa (BerberaNews) – Bandhigga Caalamiga ah ee Buugaagta (Hargeisa International Book Fair), ayaa Sabtida maanta si rasmi ah uga furmay Xarunta Dhaqanka ee Hargeysa, waxaanay socon doontaa muddo lix maalmood ah laga bilaabo 24-ka July ilaa 29 July 2021-ka.
Bandhiggan oo noqonayaa kii 14aad, waxa sannadkan hal-ku-dheg looga dhigay “Deris-wanaagga”, waxaana marti ku ah dalka Ethiopia oo agabkiisa hiddaha iyo dhaqanka iyo taariikhdiisa dhaqan ee uu leeyahay lagu soo bandhigay. Isla markaana waxa ka soo qeybagalay Wefti ka socda dawlada Federaalka Ethiopia iyo Dawlad-Deegaanka Soomaalida.
Guddoomiyaha Xarunta dhaqanka Hargeysa, ahna Aasaasaha Carwada Caalamiga ah ee Buugaagta Hargeysa Dr. Jaamac Muuse Jaamac oo ka hadlay Bandhigga, ayaa waxa uu yidhi, “Waxaynu isugu nimi bandhigii 14aad ee Bandhiga caalamiga ah ee Buugaagta Hargeisa, oo qeyb ka noqday taariikhda qarankan iyo umaddan Somaliland. Carwada Buugaagta sannadkasta waxa cusub ayaa jira, dalka inoo martida ahi waa Ethiopia, sannadkan 2021 halku dhigu waa ‘Deris Wanaaga. Sannadkii hore waxa joojisay carwada COVID 19-ka.”
“Bandhigani waa laba bandhig oo is-gaadhay,dadka imanaya badnaantooda, dhalinyarada gobolada Somaliland ka imanaysa badnaantooda, iyo dalalka Jabuuti iyo Ethiopia awooda baddan ee ay saareen inay inooga yimaadaan dad gaadhaya 50-Qof oo isugu jira Wasiiro, Xildhibaano, Shaqaale, oo ay la socdaan Qoraagii, Fanaankii iyo Gabayaagii. Runtii aad ayaan ugu farxay oo ay kaga duwan tahay kuwii hore”.
Wasiirka oo hadalkeeda sii wadatay, waxa uu yidhi, “Xaruntani waxay kulmisay dadka buugaagta iyo dhaqanka jecel. Dhaqanku waa inuu noqdaa muftaaxi dadka isku dhaweynayay ee furfurayay. Markaa aad iyo aad ayaan ugu faraxsanay inaan metelo dhalinyarada, Suugaanta iyo dhaqanka waanan ku faraxsanahay sida quruxda badan ee naloo soo dhaweeyey”.
Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo ka hadlayey muhiimadda Bandhigga buugaagta Hargeysa, waxa kale oo uu yidhi, “Bandhigga Buugaagtu waxa uu kobcinayaa garaadka dhalinyaradeena, garaadka aqoonyahankeena, waxa isugu yimi intaas oo aqoonyahan oo laga faa’iideysanayo oo ka kala socda daafaha caalamka. Sannadkan waxa la soo qaatay derisnimada, waxay ka bilaabantaa aqalka kugu xiga, sidaas ayay u soconaysaa, mujtamaca kugula nool Magaalo, dalka kugu xiga, dunida oo dhan.”
“Haddii aynu nahay Afrika waa in qobqobnaanta laga baxaa oo la is-dhexgalaa. Mujtamaceena Afrikaanka ahi waa inay xoojiyaan is-dhexgalka oo laga bilaaba dalba dalkuu ku xigo. Muddada aynu jirnay Somaliland iyo Ethiopia is-dhexgalka aad ayay u wadaan haday tahay dhaqaalaha, Siyaasadda iyo hadday tahay waxbarashada. Jabuuti waa dal aan Af iyo wax walba wadaagno, is-dhexgalkeenu wuu sareeyaa”.Ayuu yidhi Cabdiraxmaan-SAYLICI.
Daawo Sawirrada daah-furka Bandhigga 14aad ee Carwada Caalamiga ah ee Buugaagta Hargeysa
Previous articleTaliyihii Booliska Degmada Gar-adag oo la dilay
Next articleSomaliland: The 14th Hargeisa International Book Fair #HIBF2021 kicks off